Imaaraadku waxa uu saxeexay heshiis oo ay ku iibsanayaan 80 diyaaradood - Jowhar somali news leader
By hanad	 Last updated Dec 3, 2021
Imaaraatka Carabta ayaa heshiis la saxiixday 80 diyaaradood oo nooca Rafale ah oo lagu farsameeyo dalka Faransiiska, waana dalabkii ugu ballaarnaa ee abid lagu sameeyo diyaaradaha dagaalka, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen Jimcihii mar uu booqday madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Imaaraadka Carabta, oo ka mid ah macaamiisha ugu weyn ee warshadaha difaaca Faransiiska, ayaa sidoo kale ogolaatay inay iibsadaan 12 helikobter ah oo gaadiidka dagaalka ah oo Caracal ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Faransiiska.
“Tani waa natiijada iskaashiga istiraatijiyadeed ee labada dal, xoojinta awooddooda ay ugu wada dhaqmaan madax-bannaanidooda iyo ammaankooda,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Faransiiska ayaa sheegay in heshiiska diyaaradaha iyo helikabtarrada uu ku kacayo 17 bilyan oo Yuuro.
Wasiirka Difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa ku tilmaantay heshiiska “mid taariikhi ah” barteeda twitter-ka, iyadoo sheegtay inuu si toos ah uga qayb qaatay xasilloonida gobolka.
80 Rafale. Saxiixa qandaraas taariikhi ah avec les Emirat arabes unis. Wadashaqeyn istiraatijiyadeed oo ka adag sidii hore. Fière de voir l’excellence industrielle française au sommet.
Dalabka Rafale ayaa ah kii ugu weynaa ee abid loo sameeyo si caalami ah tan iyo markii ay shaqada soo gashay 2004tii.
Heshiiska waxaa saxiixay madaxa shirkadda Dassault Aviation Eric Trappier iyadoo Macron uu wadahadal kula jiray dhaxal-sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan maalintii ugu horreysay ee uu booqdo Khaliijka.
Imaaraatka Carabta ayaa iibsada Rafales oo ay dhistay shirkadda Dassault, waxayna Imaaraadku raacayaan hoggaanka dalka Qatar ee Khaliijka oo iibsatay 36 diyaaradood, iyo Masar oo soo iibsatay 24 diyaaradood sannadkii 2015 iyo 30 horaantii sanadkan.
Saamiyada Dassault ayaa kor u kacay 6 boqolkiiba ka dib ku dhawaaqista.
Ganacsi goos goos ah
Moodooyinka dayuuradaha F4, kuwaas oo weli ku jira 2 bilyan oo Yuuro barnaamijka horumarinta ee loo qorsheeyay in la dhammaystiro 2024, ayaa la bixin doonaa laga bilaabo 2027.
Wada xaajoodyada tooska ah iyo kuwa tooska ah ee diyaaradaha dagaalka Rafale ayaa socday in ka badan toban sano, Abu Dhabi ayaa si cad u diiday dalabka Faransiiska ee ah in uu bixiyo 60 jets 2011-kii isagoo ku tilmaamay “mid aan tartan lahayn oo aan macquul ahayn.”
Tan iyo markaas, Rafale wuxuu horumar ka sameeyay suuqa caalamiga ah inkasta oo ay tartan ka heleen warshadeeyayaasha Mareykanka iyo Yurub. Hadda waxay leedahay lix macmiil oo ajnabi ah, oo ay ku jiraan Qatar, India, Masar, Greece, iyo Croatia.
Imaaraadku wuxuu horey u ahaa macmiilka shanaad ee ugu weyn warshadaha difaaca Faransiiska isagoo haysta 4.7 bilyan oo Yuuro intii u dhaxaysay 2011 iyo 2020, sida lagu sheegay warbixin baarlamaanka.
Paris waxay saldhig ciidan oo joogto ah ku leh caasimadda Imaaraatka.
Ilaha difaaca ayaa sheegaya in Rafale uu bedeli doono markabka Mirage, ayna u badan tahay in uusan meesha ka saari karin F-35-ka Mareykanka, iyadoo Imaaraadku uu wali ilaalinayo ammaankiisa oo uu la socdo laba shirkadood oo waaweyn oo kala ah Faransiiska iyo Mareykanka.
Booqashada Macron ee Imaaraadka Carabta ayaa qeyb ka ah safar labo maalmood ah oo uu ku tagayo Khaliijka oo ay ku jiraan Qatar iyo Sacuudiga.
hanad 6773 posts